Waa kuma safiirka cusub ee Dowladda Maraykanku u magacowday Somalia? | Berberanews.com
Home WARARKA Waa kuma safiirka cusub ee Dowladda Maraykanku u magacowday Somalia?
Waa kuma safiirka cusub ee Dowladda Maraykanku u magacowday Somalia?
Ka dib markii Jaamacadda uu ka soo qalinjebiyay wuxuu André ku soo noqday Afrika, wuxuuna ka shaqeynayay mashruuca dib u dejinta qaxootiga, intii u dhexeysay 1988 illaa 1990.
André wuxuu guursaday Salma Rahman, oo iyadana arrimaha caalamka uga shaqeysa Dowladda Mareykanka, waxayna isu dhaleen, Ruhiyyih Rahman André.
Previous articleTurkiga oo samaystay gantaal dhif ku ah dunida
Next article“Waa nasiib daro kale oo naxdin leh dagaalka” La taliyaha Madaxweynaha